सम्भव छ सेतो दुबीको उपचार – Health Post Nepal
सम्भव छ सेतो दुबीको उपचार
२०७६ असार २६ गते १०:०९
प्रत्येक मानिसको शरीरमा कुनै न कुनै किसिमको रङ हुन्छ । शरीरमा रङ बन्ने प्रक्रिया हुन्छ । आमाको पेटमा हुँदा एक किसिमको कोष बन्छ, जसलाई मेलानोसाइट नामले चिनिन्छ । यसले मेलालिन बनाउँछ । यो एक किसिमको केमिकल हो, जसले छालालाई पूरै शरीरमा रङ दिन्छ । यो रङ जसको शरीरमा बढी हुन्छ, उसको छाला कालो हुन्छ । र, जसको छालामा कम हुन्छ, त्यस्तो छालालाई गोरो भन्ने गरिन्छ । हामी नेपालीको छाला न धेरै कालो, न धेरै गोरो हुन्छ । यस्तो मध्यमखालको छालालाई गहुँगोरो भनिन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको छालामा रङको समस्या बढी र कम हुन सक्छ । बढी भएमा कालो दाग भनिन्छ भने कम भएमा त्यसलाई सेतो दाग भनिन्छ । बोलीचालीको भाषामा त्यसलाई सेतो दुबी भनिन्छ । यदि संसारको तथ्यांक हेर्ने हो भने सेतो दुबी हुने व्यक्ति ०.५ देखि २ प्रतिशत छन् ।
नेपालको तथ्यांकअनुसार सोतो दुबी दिनप्रतिदिन बढ्दोक्रममा छ । हाम्रो क्लिनिकको तथ्यांकअनुसार ६ देखि ८ प्रतिशतले बिरामीको चाप बढिरहेको छ ।
के हो सेतो दुबी ?
सेतो दुबी एक प्रकारको छालामा हुने समस्या हो, जुन शरीरमा छालालाई रङ दिने कोषहरूको कमी भएर देखापर्छ । हरेक व्यक्तिको शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ । त्यो क्षमता कहिलेकाहीँ बढी भएर आफ्नै शरीरविरुद्ध काम गर्ने गर्दछ र छालालाई रङ दिने कोषहरूलाई नष्ट गर्दछ । यो समस्या जुनसुकै उमेरमा पनि आउन सक्ने भए पनि साधारणतया दुई उमेर समूहमा बढी हुन सक्छ । १० देखि २० वर्ष र ४० देखि ५० वर्ष उमेरसमूहका व्यक्तिमा बढी देखापर्छ । साधारणतया सेतो दुबीलाई रोग नै मानिँदैन । यो दुख्दैन, पोल्दैन, अरूले के भन्ला भन्ने मात्रै हो ।
शरीरको कुन अंगमा बढी देखापर्छ ?
सेतो दुबी प्रायः धेरै चलिरहने शरिरका अंगहरूमा देखापर्छ । जस्तै, आँखा, ओठ, कम्मर, कुइनो, घुँडा । यो अरुलाई सर्ने व्यथा होइन, तर आफ्नै शरीरमा भने फैलिन सक्छ । शरीरको अवस्थाअनुसार तनाव, थाइराइड, सुगर आदि छ सेतो दुबी बढ्न सक्छ ।
सेतो दुबी आएपछि के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
सेतो दुबी हुने व्यक्तिले चोटपटक लाग्ने काम गर्नैहुँदैन । त्यसैगरी, टाइट कपडा र जुत्ताहरू लगाउन हुँदैन । घाममा बस्नु फाइदाजनक मानिन्छ, तर नरमखालको घाममा मात्र बस्नुपर्छ । बिहान ५ बजेदेखि ११ बजेसम्मको घाम र दिउँसो २ देखि ५ बजेबीचको घाममा बस्नु राम्रो मानिन्छ । तर, ११ देखि २ बजेसम्मको घामले छालालाई असर गर्ने गर्छ । सेतो दुबी भएका व्यक्तिले जाँड, रक्सी र चुरोटबाहेक अन्य जुनसुकै खानेकुरा खान सक्छन् ।
सेतो दुबीको उपचार सम्भव छ ?
सेतो दुबीको उपचारका दुई तरिका हुन्छ । एउटा औषधि सेवन गरेर तथा लगाएर घाममा बसेर उपचार गर्न सकिन्छ । अर्को मेसिनमा सेक्ने गरिन्छ, जसलाई फोटोथेरापी भनिन्छ । यो प्रविधि सुरक्षित छ, गर्भवती महिला तथा भर्खरै जन्मेको बच्चालाई समेत दिन मिल्छ । यस प्रविधिबाट पनि निको नभएको खण्डमा शल्यक्रियामार्फत उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
One thought on “सम्भव छ सेतो दुबीको उपचार”
Dachhiring Tamang says:
मेरो पेटाम कालो थोप्ला छ यसले के हुन्छ